Anyi bu Top 10 Social Media Blog! | Martech Zone
Anyi bu Top 10 Social Media Blog!
Mọnde, Jenụwarị 30, 2012 Mọnde, Jenụwarị 1, 2018 Douglas Karr
Ọ bụ ihe ịtụnanya na ndị ọgbọ gị ga - amata gị - mana taa na - ewere ya ọfụma! Michael Stelzner si Social Media Examiner blọọgụ, rue ugbu a, bụ otu n’ime blọọgụ mgbasa ozi na mgbasa ozi mmekọrịta na-ewu ewu nke ọma na ntanetị. Ọbụghị naanị na o nwere nnukwu ọdịnaya na ihe ịtụnanya… ọ dịkwa achọghị ọdịmma onwe ya n'ịkwalite ndị ọzọ.
Taa, a na - akpọ aha m dịka otu blọọgụ Social Media Top 10 Social Media! Nke a bụ ndepụta niile:
Ọnụ Ọha - Ọnụ Ọha, brainchild nke Francisco Rosales, na-enye nyocha miri emi na nke eziokwu na mgbasa ozi mgbasa ozi na usoro ndị metụtara ụlọ ọrụ anyị. Ebe nrụọrụ ahụ nwere nkọwa zuru ezu na ihe atụ ụwa n'ezie, na-ekwupụta isiokwu ọhụrụ na nke siri ike.
ViralBlog - ViralBlog na-enye kwa ụbọchị nke usoro mgbasa ozi mmekọrịta na mkpali site na ọmụmụ ihe na isiokwu ndị ọzọ na-atọ ụtọ. Saịtị nwere ọdịnaya magburu onwe ya na ndụmọdụ na ndụmọdụ bara uru.
Jeff Bullas - Jeff Bullas jiri nlezianya leba anya n’otu esi enweta azụmaahịa na ntanetị site na mgbasa ozi mmekọrịta. Saịtị ahụ nwere ọdịnaya magburu onwe ya na nghọta mmekọrịta ọha na eze siri ike.
Hubze - Hubze emeela ndị na-ege ntị site n'ilekwasị anya na usoro mgbasa ozi mmekọrịta na ndụmọdụ na usoro mgbasa ozi mgbasa ozi. Saịtị ahụ nwere ọtụtụ ụdị mgbasa ozi mara mma, gụnyere isiokwu na pọdkastị.
Ọrịre Ahịa - Ọrịre Ahịa si Marcus Sheridan bu blog nke choro iru obodo gburugburu ahia inbound, ịde blọgụ, azụmahịa na ndu. Saịtị na-akwalite obodo siri ike site na itinye oke site na nkọwa.
Na-agbagharị na Social - Na-agbagharị na Social site na Stanford Smith na-enye usoro ịde blọgụ bara uru na akụrụngwa site na ntụgharị ọhụụ. Ebe nrụọrụ ahụ nwere ihe okike, ihe ọmụma na nke nwere ike ịgụ ya na ndụmọdụ dị omimi.
Heidi Cohen - Heidi Cohen -enye ọgụgụ isi nghọta na-elekọta mmadụ media si eme na ọnọdụ, niile na-eme ka mgbagwoju anya dị mfe. Ebe nrụọrụ ahụ nwere ọdịnaya zuru ezu ma chebara echiche.
BlogTechTech Blog - AhịaTech blog na-enye usoro teknụzụ gbadoro ụkwụ na mgbasa ozi mgbasa ozi ọhụụ. Saịtị ahụ na-ekpuchi isiokwu dị iche iche na mgbasa ozi, gụnyere redio na vidiyo.
Media dị ka - Media dị ka na-eme ka ndị na-agụ akwụkwọ ugbu a na ọnọdụ ụlọ ọrụ na ngwaọrụ ọhụụ ma na-enyekwa usoro na usoro maka iji Facebook na mgbasa ozi mgbasa ozi. Saịtị ahụ nwere ozi dị ugbu a na ngwaọrụ na nyiwe ọhụụ.
SplashMedia - SplashMedia na-enye ihe na-adọrọ mmasị na-ewe na atụmatụ, ndụmọdụ na ọnọdụ, ebe SplashCasts ha na-enye ụfọdụ nnukwu akụkọ ọma. Ebe nrụọrụ ahụ nwere oke ojiji nke ihe ngosi vidiyo yana ọkwa dị iche iche nwere ọdịnaya dị omimi.
Ekele dịrị ndị ọrụ na ndị ikpe sitere na Social Media Examiner. E wedara m ala ma nwee ekele maka nkwado niile ị nyere anyị kemgbe ọtụtụ afọ!
Tags: heidi cohenhubeeJeff Bullasmgbasa ozi dị ka yamarcus sharidanBlog Ahịa Blogna-akpali mmadụmgbasa ozi mgbasa oziọnụ mmadụsplashmediaonye ọka iwu standfordndị ahịa ọdụmblọọgụ kacha elutop mgbasa ozi mgbasa ozitop irinje virus
Melissa Reyes kwuru
Jenụwarị 30, 2012 na 3:16 PM
Ekele! Nke a bụ ezigbo nsọpụrụ, ma gị na ụlọ ọrụ dị ịtụnanya! Daalụ maka ị na-akpali anyị niile.
Jenụwarị 30, 2012 na 3:18 PM
Daalụ nke ukwuu, @ twitter-277728414: disqus!
Jenụwarị 30, 2012 na 8:12 PM
Doug, ị tinyela etiti etiti ugwu na maapụ mgbe ọ bịara ozi bara uru yana nkọwa na-enyere ọtụtụ azụmaahịa aka iru ma gafere ebumnuche ahịa ha. Ndị na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ na mkpọtụ ọcha. Daalụ maka ịbụ olu doro anya nke ihe ọmụma na-enyere anyị niile aka ime nke ọma, ma mekwaa ihe. Ekele dịrị gị nke ọma ka ị mata gị.
Jenụwarị 30, 2012 na 8:28 PM
Marty, daalụ nke ukwuu. Okwu oma nke onye m na-akwanyere ugwu! (ugbu a ma ọ bụrụ na anyị nwere ike inwe Midwest mara 😉
Jan 31, 2012 na 11: 49 AM
Ekele m. Nke a bụ ihe kpatara ị ji nọrọ na listi ibe m.
Feb 1, 2012 n’elekere 7:55 nke abali
Ekele. Nke a kwesiri nke ọma, ị bụ otu n'ime ndị kachasị m gaa na isi mmalite maka ihe niile na mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Feb 1, 2012 n’elekere 8:47 nke abali
Mee 13, 2012 na 7: 44 AM
O doro anya na Social Media Examiner bụ blog ọhụụ na blọọgụ mgbasa ozi.
Omume achọghị ọdịmma onwe onye nanị na-akwụghachi ụgwọ ogologo oge. Site ugbu a gaa n'ihu m ga-abụ
ọ bụ onye ọrụ mgbe niile. Enwere m olileanya na ọ ga-enyere m aka imeziwanye nkà m dị ka